‘जनताका नेता, सीताराम मेहता भन्छन्, ‘विकासको मुल फुटाउँछु’ - Khula Patra
‘जनताका नेता, सीताराम मेहता भन्छन्, ‘विकासको मुल फुटाउँछु’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर १२, २०७४
प्रकाशित समय: १३:४७:२५
इनरुवाको सेरोफेरोमा ‘जनताका नेता, सीताराम मेहता’ भन्ने ब्रान्डेड भनाइ निकै प्रचलित छ । सम्झिनु र सूचना दिनु मात्र पर्छ, जनताले सम्झेका हरेक साना–ठुला कार्यक्रम र अवसरहरूमा उनी पुगेकै हुन्छन् । यही सरलता र आफ्नोपनका कारण उनी सुनसरी जिल्लामा निकै लोकप्रिय छन् । सहकारी अभियानमा दिएको योगदानका कारण मेहतालाई नचिन्ने मान्छे विरलै होलान् ।
नचाहिँदो र झुटो आश्वासन नदिने र जनताको काम गर्ने नेताका रूपमा परिचित मेहता अनुभवका पारखी मात्र होइनन्, नेपाली काङ्ग्रेसका एक सच्चा सारथी पनि हुन् । २०२९ सालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सदस्यका रूपमा राजनीतिक यात्रा आरम्भ गरेका उनी जननेता विपी कोइरालाको राजनीतिक मार्गचित्रमा आजसम्म अविचलित हिँडिरहेका छन् । मेहताले यस अवधिमा इनरुवा नगरपालिकाको उपप्रमुख, कार्यवाहक प्रमुख, संविधानसभामा सभासद् र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका छन् । जनस्तरमा निकै रुचाइएका, विकासप्रेमी मेहता नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ मा प्र्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका छन् ।
उनको विजय निरन्तर सङ्घर्षबाट खारिएको, खोजेको बेला जनताको घरदैलोमा भेटिने नेताको सम्मान र प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रतिको तपाईको आस्था संस्थागत हुनु हो । मेहेताले इनरुवा–कौवाखोच सडक २२ किलोमिटर , इनरुवा–सत्तेरझोरा–विराटनगर जोड्ने बाटो , देवानगन्ज–विराटनगर सडक ,२०१५ सालमा विपीले निर्माण गर्न चाहेको सुनसरी सिँचाइ योजना , पाँचौसिमर, कप्तानगन्ज, भारत बोर्डरबाट देवानगन्ज, हरिनगरा, भुटाहा हुँदै जनताचोक, राजमार्ग जोड्ने बाटो ,सुनसरी क्याम्पस, बलाहा क्याम्पस तथा विभिन्न शिक्षालयको भौतिक एवम् शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग , २० वर्ष जिल्ला सहकारी सङ्घ सुनसरीका अध्यक्षका रूपमा विशेष योगदान , इनरुवामा सिटी हल निर्माण सुरु , इनरुवा जेल मैदानलाई खेल मैदानमा रूपान्तर गदै इनरुवा अस्पताल २५ बेडबाट ५० बेडमा रूपान्तर गर्ने सफल भएका नेता मेहेतासँग गरेको कुराकानीः
तपाइको उमेद्धवारी के को लागी ?
सुनसरी क्षेत्र नं २ लगायत सम्पुर्ण सुनसरी जिल्ला भरी नेपाली कांग्रेसले सोचे जस्तो समानान्तर बिकाशको अवधारणा लाइ गाउँ गाउँ सम्म पुर्याउन मेरो उमेद्धवारी हो । मैले पहीले संबिधान सभा सदस्य हुँदा बाचा हरु सम्पुर्ण पुरा गरे । अब बिकाश निर्माण मात्र कांग्रेसको मुख्य एजेण्डा भएकोले बिकाश र परीवर्तनको लागी मलाइ कांग्रेसले उमेद्धवार बनाएको हो ।
तपाइ आफुले आफुलाइ कसरी परिचित गराउनु हुन्छ ?
म एक साधारण किसानको छोरा हुँ । म भुसको घरमा जन्मिएको त्यही हुर्केको । सरकारी बिद्यालय पढेको हँ । मैले राजनैतिक रुपमा प्रगती गरे होला । तर त्यसलाइ आफ्नो व्यात्तिगत रुपमा नाफा कमाउन प्रयोग गरीन । म मन्त्रि हुँदा धेरै आर्थीक प्रलोभनका कुरा हरु आए तर मैले यो जनताको र म जस्तो समान्य परीवारको लागी हितमा हुदैन भनेर पन्छिएको छु । त्यसैले म आफुलाइ कांग्रेसको आदर्श अनुसार अगाडी बढ्ने सिपाही भन्न रुचाउछु । मलाइ जनता लै नै न्वरान गरीदिएका छन् । गरीबका नेता सिताराम मेहेता । म त्यही हो ।
चुनाव प्रचार प्रसाृर कस्तो छ ? तपाइलाइ भोट किन दिने ?
चुनाव प्रचार प्रसार तिव्र रुपमा अगाडी बढीरहेको छ । औपचारीक घोषणा हुन बाकी हो । जित कांग्रेसकै पक्षमा छ । घर घर बाट दाजुु भाइ दिदिबहिनी हरु प्रचार प्रसारमा हिड्नु हुन्छ । हरेक ठाउँमा जादा तपाइको जित भइसक्यो भनेर शुभकामना दिनुहुन्छ ।
जहा सम्म भोटको कुरा छ । सुनसरीमा अब बिकल्प भनेकै कांग्रेस नै हो । बिकाश, परीवर्तन, समृद्धी जे भनेपनि कांग्रेसकै अग्रसरतामा मात्र सम्भव छ । म कांग्रेसको उमेद्धवार भएको हिसाबले म आफैले भनेर भन्दा पनि कांग्रेसको योजना र निति बमोजिम काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस पनि बिकाश र समृद्धीकै पक्षमा छ । भनेपछी बिकाश त्योपनि समानान्तर बिकाशको लागी मलाइ भोट ।
तपाइको जित्ने आधार के ?
पहीला वामहरुले जितेको सुनसरी का धेरै क्षेत्र सुनसान बने । तर कांग्रेसले जितेको ठाउँमा बिकाशको लहर देखीयो । म आफैले पनि सुनसरी खोलामा पुल बनाउने, गाऊँ गाऊँमा खानेपानी, बिद्यालय भवन र सडक को क्षेत्रमा सबै भन्दा धेरै लगानी भित्राएर काम हुदैछ । त्यसलाइ पुर्णता दिन र नयाँ योजना ल्याउन पनि जिन्नै पर्ने हुन्छ । अर्को कुरा सम्पुर्ण जनता लोकतन्त्रको पक्षमा छन् नकि साम्यबादको । लोकतन्त्र पे्रमिले भोट हाल्छन् । र अहिले प्रदेशसभाका उमेद्धवार हरु एकदमै लोकप्रिय युवा हरु छन् । त्यसमा पनि बिजय कुमार गच्छाधार कांग्रेस फिरे संगै कांग्रेको माहोल पुरै परीवर्तन भएको छ । त्यसले जित्ने आधारहरु अनगिन्ति छन् ।
तपाई बिजयी भएको खण्डमा के गर्नु हुन्छ ?
म जे भन्छु त्यो गरेर देखाउछु । कांग्रेस लाइ ढाट्न आउदैन । म सुनसरी क्षेत्र नं २ लाइ बाढी र डुबान रहीत क्षेत्र बनाउछु । टेङ्ग्रा खोला, बुढीखोला र सनसरी खोलमा बाध बाध्ने । साथै सेरा खोला समस्याको दिर्घकालीन समाधान गर्ने । सुनसरी खालामा थप दुइ ओटा पुल निर्माण गर्ने । झुम्कामा रहेको कृषि केन्द्रलाइ कृषि अध्ययान बिश्वबिद्यालय बनाउने । पाँच बर्ष भित्र हरेक गाउँमा सडक पुर्याउने र सुनसरी हरेक सरकारी बिद्यालयलाइ अंग्रेजि भाषामा पढाउने व्यवस्था मिलाउने साथै
कतै तपाइ कांग्रेस भित्र प्रचलित अन्तर्घात रोगको शिकार बन्नु हुने त हैन ?
यसपाली कांग्रेसले त्यो रोगको अप्रेसन गरीसक्यो । कुनै बाछीटा पनि बाकि छैन । बरु यो रोग बाम गठबन्धनमा सरेको जस्तो छ । धेरै बाम गठबन्धनका नेताले हामीलाइ सघाउने बताउदै हनुहुन्छ । कांग्रेस बामको कारण पनि शत्तिशाली भएको छ । अन्र्तघात त हैन आत्मासात चाहीँ बढीरहेकोछ ।